16 oo ka socota İZDENİZ xafladaha Surprises | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir16 From IZDENİZ Ku Qaadista Milyan Rakaabka
31 / 12 / 2018 35 Izmir, 77 Yalova, Turkish Aegean, GUUD, Headline, TURKEY
16 Million Rikoodh Rakaabka 1
Tirada sanadlaha ah ee rakaabka ay qaadaan IZDENIZ ayaa ku kordhay 2013 milyan tan iyo 2,5; Markii ugu horreysay dhammaadka 2018, “16 milyan oo biyo-xireen ıl ayaa la dhaafay. Waxaa Izdemir, raxan yaraa oo ugu casrisan Turkey ayaa bilaabay in ay u adeegaan Izmir degmada Metropolitan, ayaa gaaray in la kordhiyo tirada rakaabka muuqata. Markabka 2014 markab, oo loo adeegsaday ilaa 15, ayaa soo gaabiyey xilliyada safarka iyo kordhinta raaxada. Tirada rakaabka markabka, oo ahaa 2013 milyan oo ku yaal 13.5, waxay gaadhay 9 milyan iyada oo la bilaabay ofakabey iyo 2014 bishii Sebtember. Markii la dhammaystiray duulimaadka, tirada rakaabka qaada maraakiibta ayaa si aad ah u kordhay. Marka laga soo tago xawaaraha, nabadgelyada iyo raaxada maraakiibta cusub, kororka tirada daroogada iyo tirada daroogada, iyo sidoo kale fududeynta la siiyo dadka naafada ah iyo rakaabka waayeelka ah, ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay kororkan.
16 wuxuu noqdaa rakaab milyan milyan ah
IZDENIZ, sababta oo ah tirada rakaabka qaadaya 2018 waxay gaartaa 16 milyan Karşıyaka Ku qabtay xaflad si lama filaan ah uga dhacday dekedaha. Waxkastoo aan ka warqabin, Neslihan Özkan, oo fuulay 14.30 Konak doonta qalliinka walaalkiis, ayaa la yaabay markii uu arkay rakaabka D 16 milyan ee rakaabka ah "oo arkay markab gacan-ka-awood badan" saraakiisha İZDENİZ hortiisa. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inuu ku nool yahay Buca laakiin uu doorbido gaadiid maraakiibta markasta oo uu helo fursad, ayuu yiri Özkan, “Maraakiibta jiilka cusub labaduba waa kuwa raaxo leh oo aad u dhakhso badan. Xitaa haddii aan shaqo haysan, waxaan ku safraa doon fududaan si aan u neefsado hawada badda. Runtii tani fursad weyn ayey u tahay dadka reer Izmir. Waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir adeegan ”.
Taasi waa tirada rakaabka lagu daray
2013 milyan 13 kun oo ku yaal 500, 2014 milyan 14 kun oo ku yaal 800, 2015 milyan 14 kun oo 300, 2016 milyan 14 in 800, 2017 milyan 15 kun oo 900, 2018 milyan 16 kun oo sano gudihii 1. Dhawaan, tirada gawaarida lagu rakibay İZDENİZ gawaarida gawaarida waxay dhaaftay xadka XNUMX milyan.
Maraakiib casri ah oo badbaado leh
15 waxaa loogu talagalay socdaallada dhulka hoostiisa halka 13 loogu talagalay socdaalada badda gudaha. Dr. Maraakiibta Azar Sancar waxaa loo dhisay si waafaqsan HSC code. Labada markab ee gaara xirmooyinka 30 waxay leeyihiin awood ay ku sameeyaan safarada caalamiga ah.
Maraakiibta ayaa tegi kara maylalka 400 mayl la’aan. Ka xoog badan tahay birta, ka fudud aluminiumka, cimri dheeri ah, cimri dheeri iyo qiime howleed hooseeya, oo laga soo saarey agab ka kooban kaarboonka, 400 rakaabka iyo awoodda xamuul ee 4. Maraakiibta leh nidaamka kontoroolka elektiroonigga oo buuxa iyo wareejinta awoodda, sidaa darteed wareejinta iyo kala sooca berth waxaa lagu sameyn karaa waqti aad u gaaban.
Kuraasta raaxada iyo ergonomic waxay u oggolaadaan masaafad aad u ballaaran oo u dhexeysa kuraasta. Waxaa jira dusha macquul ah oo loogu talagalay rakaabka aragga curyaanka ah iyo, meeshii loo baahdo, digniinta la hubo iyo calaamadaha hagida ee ku qoran Braille. Muuqaal kale oo maraakiibta ayaa ah jiritaanka boosaska Baaskiilka ee 10 iyo qafisyada xayawaanka ee madax-bannaan.
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay bixisaa adeeg gaadiid oo raaxo leh oo wata gawaarida rakaabka ee 3 oo leh astaamo sare oo lagu soo kordhiyay duulimaadkeeda gudaha xadka "Mashruuca Horumarinta Gaadiidka Badda".
Rakaabka basaska Farxiyo u raacaya Bayram Rakaabka ka socda IMM
BoZDENİZ Doon Badeed